8 Zvikonzero Zvako Kubhadhara Pa Kubaya Sarudzo Zviri Kukundikana | Martech Zone
8 Zvikonzero Zvako Kubhadhara Pa Kubaya Sarudzo Zviri Kukundikana
Chishanu, February 6, 2015 Douglas Karr
Mwedzi uno pa Kumucheto kweWebhu Radio, tiri kufamba nemubhadharo pamatanho ekubaya, tichikurukura mashandisiro, uye nekupa matani uye ruzivo. Vashambadzi vanoziva kukosha kunoshamisa uko kunobhadhara pakutsvaga kushambadzira kunogona kuwana mukuvaka ruzivo kana iwe usina chiremera chekutsvaga, kutora zvinotungamira, uye kutora vateereri vanokodzera vakagadzirira kutenga kwavo kunotevera.
Izvo zvakati, mhinduro yakajairika yatinonzwa pakati pePPC vanokanganisa ndeiyi:
Ah, takaedza PPC uye haina kushanda.
Isu tinobva takamanikana mukutarisa pane izvo tsananguro ye akaedza iri uye ramba uchitsvaga kukanganisa nemaitiro akaendeswa. Ini ndichave akatendeseka mukuti ini handisati ndaona mutengi mumwe achitadza kushandisa mubhadharo pakukanya kana mishandirapamwe ichiongororwa, kuitwa zvakanaka, kuyedzwa, uye kutaurwa nenzira kwayo. Hezvino zvikonzero zvatakaona PPC ichitadza:
kubatikana - Vatengi vanoda kuyedza mvura nePPC asi havadi kupinda vese. Zvichida ivo vanongoda chete mari iyo $ 100 koponi ravakatambira mutsamba. Chero nzira, bhajeti yekutanga ishoma kwazvo zvekuti havana zvakakwana kuti vaedze mabhii akakosha akakosha, kusabatanidza mazwi asiri akakodzera, uye kuwana nzira dzakaringana dzekuburitsa pfungwa yekuti yavo mamakisi mamaki ari kuvandudzika uye nemazano makuru ekushandisa. Mari yako yekutanga yekudyara inoda kuve yakakurisa kukura pane yako yemwedzi wega yaunotarisira kushandisa paPPC kuyedza, kuyera, kugadzirisa uye nekuisa tarisiro pamutengo wako pamutungamiri, mhando yekutungamira, uye kukosha kwekushandurwa. PPC haisi imwechete mushandirapamwe kana chirongwa, inzira inogona kuvandudzwa nekufamba kwenguva uye inoda manejimendi nevashandi vanokwanisa.
Kwete Mapeji Ekumhara - Pandinodzvanya kushambadza kwePPC uye zvinondiunza kune peji rekumba, ini ndinotangisisa maziso angu ipapo ipapo. Peji rako rekumba ndiyo mepu yezvako zvemukati asi pandakatsvaga ndakakupa mazwi akakosha nezvandaitsvaga. Iwe unofanirwa kuve uine akawanda, kana asiri mazana, emapeji ekumhara ayo ari kumusoro anotarisana nemazwi akakosha auri kunanga!
Sarudzo dzekutendeuka - Haasi munhu wese anoda kutenga kubva kuPPC kushambadza kubaya. Vamwe vari kutanga kwavo kuita sarudzo uye vanoda kutsvaga. Kupa sarudzo dzekunyorera, kurodha pasi whitepaper, kusaina kuratidzira, kana zvimwe zvingasarudzwa zvese shanduko dzinogona kutyaira mushandisi wekutsvaga mumushanyi anoshanda zvakanyanya. Uye nekuti havana kusaina hazvireve kuti havasi kuzoenda saka unofanirwa kuteedzera zvimwe zviitiko zvinotungamira kukutendeuka. Iwe unoziva kuti vangani vevatengi vako vakatanga ne whitepaper kurodha? Kana kunyorera email? Tsvaga kuti iwe ugone kugadzira izvo zvimwe zvinopihwa mumakambani ako ePPC.
Yakashata Campaign Yekutevera - Ini ndinogara ndichishamisika kana makambani aine peji imwechete yekumhara iyo yakavhurika kune ese ari maviri uye akabhadhara traffic, asi ivo havana chero mushandirapamwe wekutevera kusiyanisa iwo maviri mune avo analytics. Mune mamwe mazwi, PPC inogona kunge iri zano rakakura - ivo havakwanise kutaura nekutarisa kwavo analytics. Tora agency kubatsira kugadzirisa yako analytics nemazvo kuti iwe ugone kuyera chaizvo kubudirira kwemishandirapamwe yako.
Kwete Nhare Yekutevera - Bhizinesi rega rega rinofanirwa kuve naro Analytics-yakasanganiswa kufona-yekutevera pane yavo saiti. Sezvo nyika inofamba nhare, vanhu vazhinji uye vazhinji vari kusvetuka vachiona vhidhiyo kana kuverenga iyo whitepaper uye vachingo daidzira iyo nhamba yefoni. Tine vatengi vanokanganisa kuita kwavo kwekushambadzira uye vanopa mafoni ese kune echinyakare midhiya senge terevhizheni neredhiyo. Nepo iwo zvikamu ZVINOTYAIRA mafoni, isu tinoziva kuti yavo yakabhadharwa yekudzvanya mishandirapowo inokodzera kurumbidzwa kune yakawanda yavo yefoni traffic asi isu hatigone kuyera kusvika vaisa mari mumhinduro.
Hapana Kuedzwa - Kunamatira kumusoro kwekumhara peji kungokwana hazvina kukwana. Ruvara rwebhatani kana kana iko kutungamira kwemeso emunhu mumufananidzo wemufananidzo wechitoro unogona kukanganisa chiyero cheiyo peji rekumhara. Kumhara Peji Kuyedza chinhu chakakoshesesa chemubhadharo wega wega pamushandirapamwe wekubaya. Iwe unofanirwa kunge uri kuyedza zvese zvinhu kuti uwedzere iyo CTR uye yakazara ROI yemasevhisi ako akabhadharwa.
Urombo Zviripo - Hunhu hwehuwandu hunosanganisirawo mhando yezviri mukati peji rako rekumhara uye shanduko dzinokanganiswa nehunhu hwemashoko munzvimbo yako yese. Iwo mashoma mabara mabara haasi kuzocheka. Mavhidhiyo, zvipupuriro, makesi ekushandisa, data rinotsigira, marogo evatengi, pikicha yevashandi… zvemukati zvinoda kumanikidza zvakakwana kuti mushanyi avimbe kuti vanogona kuwana ruzivo rwavanoda kana vazadza fomu rako.
Kushaikwa kwezvinangwa - Isu nguva pfupi yadarika takave netarisiro yakapinda uye takafara chaizvo kuti akange atsanangura zvinangwa - aida 7: 1 kudzoka pane ake akabhadhara ekutsvaga kwekutsvaga. Kunzwisisa chinangwa, chiyero chekushandurwa, uye avhareji nguva yekushandura inobatsira yako PPC agency kuti inzwisise mhando yezvinodiwa zvavanoda kuburitsa, mari iyo yavanofanirwa kunge vachishandisa pamutungamiri, uye urefu hwenguva inotungamirwa nevanotungamira. Vachakwanisa kugadzirisa mushandirapamwe wako zvinoenderana uye nekukubatsira iwe kuona bhajeti yekubudirira.
Kutenda Erin pa Saiti Maitiro yekukurukura mamwe emazano aya - ita shuwa yekupinda mukati Kumucheto kweWebhu Radio uye teerera kwatiri paStitcher, BlogTalkRadio, iTunes, KushambadziraPodcasts kana chero imwe yemidziyo yekuparadzira podcast!
Tags: kumucheto web redhiyoerin anopengapamapejiakabhadhara yekutsvaga bhajetiakabhadhara ekutsvaga mapeji ekumharakubhadhara pakukandappcppc bhajetimapeji ekumhara mapejisaiti marongero
Maitiro Ekubvisa iyo iyo Pesky -2 Nyaya ine WordPress Slugs